I-Willow Barn Cottage - I-Airbnb
I-Willow Barn Cottage
Menheniot, England, i-United Kingdom
I-Willow Barn Cottage iyindlu yokulala ehlanganisiwe ethandekayo esendaweni yaseWillow Barn.
Kuyindawo enhle yokuhlala eNingizimu-mpumalanga Cornwall ibanga lokushayela elilula lamadolobhana asogwini iLooe, iPolperro neFowey.
Ikotishi linekhishi negumbi lokugezela elihlome ngokuphelele, ukufinyelela ku-Sky TV (okubandakanya Ezemidlalo namaMovie), iNetflix kanye ne-Amazon Prime. Ikotishi linobhavu oshisayo wangasese otholakala engadini yalo yangasese etholakala zikhathi zonke unyaka wonke.
Ikotishi lizimele ngokuphelele eWillow Barn elinendawo yokupaka kanye nendawo yalo yokuhlala engaphandle nengadi. Ikhishi elisanda kuguqulwa linombhede we-Super king, igumbi lokugezela kanye nendlu yangasese eyengeziwe.
Ikhishi lifakwe umpheki, i-microwave, i-induction hob, i-Nespresso coffee maker kanye nomshini wokuwasha izitsha.
Ikhishi elinepulani elivulekile lokuphumula kanye nendawo yokudlela iyindawo ethokomele kakhulu yabantu ababili. Umbhede wokuvakasha kanye nesihlalo esiphezulu nakho kuyatholakala.
I-HDTV ene- I-Amazon Prime Video, Apple TV, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude, I-Netflix, ikhebula ye-premium
Ikotishi liseduze nedolobhana laseMenheniot elinesitolo esihlomele kahle sakwaSpar kanye ne-pub. Idolobha laseLiskeard liyimizuzu eyi-8 ukushayela. Amadolobha asogwini iLooe, iPolperro neFowey afinyeleleka kalula. I-Plymouth iqhele ngamamayela ayi-14 kuphela.
Abanikazi bahlala e-Willow Barn eduze kwekotishi futhi bayatholakala nganoma yiluphi usizo izivakashi ezingaludinga.
Hlola ezinye izinketho ezise- Menheniot namaphethelo